Anker Soundcore Flare +, iftiin iyo awood muusikadaada | Wararka IPhone
Anker Soundcore Flare +, iftiin iyo awood muusikadaada
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, dhowr
Ku raaxeysiga muusikadaadu way ka sahlan tahay sidii hore maanta. Waxaan leenahay muusig taleefannadeena, kiniiniyada, xitaa saacadaheena, kuwa ku hadla qudhooda waxay leeyihiin muusiko iyadoon loo baahnayn qalab kale oo lagu bixiyo. Laakiin ku hadla fudud oo noo siiya dhawaq wanaagsan qiime aad u macquul ah had iyo jeer waa war weyn.
Tani waa sida saxda ah doorka Souncore Flare + ee Anker, afhayeen aan lahayn caawiyayaal, la qaadi karo illaa heer aan la qaadan karno meeshii aan dooneyno, oo leh ismaamul wanaagsan taasina waxay na siisaa dhawaq xoog leh oo leh basas wanaagsan, iftiin si aan ugu noolaano xafladda iyo iska caabbinta biyaha. Waxaan isku daynay waana kuu sheegeynaa waxyaabaha aan dareensan nahay.
1 Naqshad miisaaman oo lala yaabo
2 Cod xoog leh oo leh basas wanaagsan
3 Fikirka Tafatiraha
Naqshad miisaaman oo lala yaabo
Naqshadeynta sameecadaha waa wax iska caadi ah, in kasta oo ay leedahay astaan ​​"kacsan" taas oo ka dhigaysa wax xoogaa asal ah oo ka sarraysa dhammaanteed mid deggan, maadaama ay leedahay saldhig ballaadhan oo culus. Waxaa ku daboolan alaabada dharka, iyo qaybta sare iyo hoose ee caagga, ma aha afhayeen indhaha qabanaya jaleecada hore, laakiin waxay leedahay wax lala yaabo oo la dhisay oo dhiirrigelin kara wax ka badan hal.
Saldhiggu wuxuu leeyahay laydhadh LED ah oo aad isticmaali karto si aad ugu beddesho laxanka miyuusigga ee ka socda af-hayeenka, ama aad raacdo qaab gaar ah. Gabi ahaanba waa lagu habeyn karaa barnaamijka Soundcore ee loo heli karo labada iOS (isku xirka) iyo Android (isku xirka). Ikhtiyaariyadaha habayntu way badan yihiin, waxaadna ka heli kartaa nalalka ugu nasashada badan illaa diskooga ugu badan. Dabcan, haddii aadan rabin nal nooc kasta ah, waad damin kartaa.
Waxay leedahay badhanka kontoroolka dusha sare (xakamaynta ciyaarta, xakamaynta laydhka iyo qaabka BassUp si loo kordhiyo baaska), gacan qabasho si loogu qaado ama loogu xiro boorsadaada, iyo hoosta silsiladda daboolka microUSB (dib-u-buuxinta), USB (si aad dib ugu buuxiso taleefankaaga casriga ah) iyo xiriirada gelinta jack. Inaad awood u yeelatid inaad dib u buuxiso iPhone-kaaga ama taleefannada kale ee casriga ah waa wax aad loo soo dhaweynayo, sidaa darteed muusiggu uma baahna inuu istaago maxaa yeelay taleefanka ayaa kaa dhammaaday. Xidhiidhiyayaashan badhanka ah si ay ugu xidhaan iyada oo loo marayo Bluetooth iyo badhanka awoodda.
Daboolka silikoonka ayaa aad ugu habboon in la ilaaliyo isku xirayaashaas, waa muhiim haddii aan taas tixgelinno Waa ku hadla biyo-mareenka (IPX7) markaa cabsi la'aan waxaad u qaadan kartaa barkadda in la fuulo xisbiga sanadka. Iyadoo la tixgelinayo cabirkeeda iyo ismaamulkeeda (20 saacadood oo lagu soo celinayo lacag buuxda), waa ku hadla si fudud oo fudud (850gr) inuu kula tago meel kasta.
Cod xoog leh oo leh basas wanaagsan
Dhawaaqa waa mid wacdaro u leh afhayeenka cabirkan. Runtii waxay leedahay mug aad u sarreeya, in kasta oo markii aad mugga aad u riixdo aad horeba u ogaan karto xoogaa dhalanrog yar. Waxyaabaha kale ee ka dhex muuqda qaybtan waa baaska, aad u muuqda. Dhismaha sameecadda macnaheedu waa in dhawaqa loo qaybiyo qiyaastii 360º, sidaa darteed dhawaqa saameyn badan kuma yeelan doono haddii aad midigta hore ama dhinaca aad joogto, taas oo muhiim u ah in banaanka la dhigo.
Mid laakiin taas ayaa loo geyn karaa af-hayeenkan ayaa ah in markaad isticmaasho qaabka BassUp si aad u soo saarto baaska, bartamayaasha xoogaa qarsoon yihiin. Tan qayb ahaan waxaa lagu xaliya iyadoo curyaamaysa qaabkan. Dhawaaqa guud ahaan waa kuwo aad ufiican, gaar ahaan markaad tixgeliso cabirkiisa iyo qiimaheeda.. Haddii aan isbarbar dhig ku sameyno UE Boom 2, isla qiimaheeda kala duwan, waxaan dhihi lahaa dhawaqa uu bixiyo Flare + kan ayaa xoogaa ka sarreeya.
Adduunyada ay ku hadlayaan dadka caqliga badan ee ku hadla guryaha daadadku, weli waxaa jira meel loogu talagalay dadka ku hadla caadiga ee bixiya tayada codka wanaagsan ee qiimaha tartanka, taas oo aakhirka ay tahay waxa ay dhab ahaan u soo degto markay tahay hadlayaasha. Anker Soundcore Flare + wuxuu la taagan yahay awood la yaab leh cabirkiisa, baasiis aad u khuseeya iyo ismaamul wanaagsan oo leh wareejin weyn. Caabbinta ay u leedahay biyaha sidoo kale waa dhibic aad u wanaagsan, iyo sidoo kale nal gaar ah oo loo yaqaan 'LED'. Wixii intaas oo dhan waa mid ka mid ah kuwa ugu hadalka badan ee ku hadla Bluetooth ee qiimaheeda:: 109 on Amazon (isku xirka). Waxaad sidoo kale ka heli kartaa dukaamada jirka sida Worten, Media Markt iyo Orange.
Cilmiga Soundcore +
Dib u eegida: Luis Padilla
Wax ka badalidii ugu dambeysay:
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Anker Soundcore Flare +, iftiin iyo awood muusikadaada
Video-ka fikradda ah iPhone 12 Pro Max
Maalin kasta - 5G, ma joogtaa mise mustaqbalka?